RASMI: John O’Shea oo ku dhawaaqay inuu guud ahaan ciyaaraha isaga fariisan doono – Gool FM
RASMI: John O’Shea oo ku dhawaaqay inuu guud ahaan ciyaaraha isaga fariisan doono
(Yurub) 30 Abriil 2019. Ciyaaryahan John O’Shea ayaa xaqiijiyey inuu gebi ahaan ciyaaraha isaga fariisan doono marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan.
38-sano jirkaan difaaca ka dheela haatanna ka tirsan kooxda Reading ayaa ka soo baxay akadeemiga Manchester United, waxaana uu in ka badan 250 kulan u saftay kooxda waa weyn.
Sidoo kale waxa uu 118 kulan u ciyaaray xulkiisa qaranka Republic of Ireland ka hor inta uusan ka fariisan u dheelista dalkiisa bishii June.
Ciyaaryahankan Man United kula guuleystay Champions League ee O’Shea ayaa sidoo kale todoba xilli ciyaareed ku qaatay kooxda Sunderland ka hor inta uusan heshiis hal sano ah ugu biirin Royals xagaagii la soo dhaafay.
Kooxda Reading ayaa warkan ku xaqiijisay Twitter-ka, waxaana warkan uu ku soo aaday maanta oo ay ku beegan tahay laacibkan dhalashadiisii 38-aad.
Guud ahaan John O’Shea ayaa kooxda Man United kula guuleystay 14 koob intii lagu guda jiray waqtigiisii garoonka Old Trafford kaddib markii uu kooxda u soo dhaqaaqay isagoo 17-sano jir ah.
Koobabkaas waxaa ku jira shan horyaalka Premier League iyo hal koobka kooxaha Adduunka ah, waxaana uu kulankiisii ugu horreeyey ee xulkiisa qaranka uu u ciyaaray kulan ay ka horjeedeen dhiggooda Croatia sanadkii 2001, sidoo kale waxa uu u ciyaaray labo final ee European Championship sanadihii 2012-kii iyo 2016-kii.
Waxa uu O’shea uu beeca xorta ah ugu biiray Sunderland sanadkii 2011-kii heshiis aan qiimihiisa la shaacin.
Xilli ciyaareedkan waxa uu keliya u saftay 10 kulan kooxda Royals lagu naanayso.